अभिनेता रणवीरको अँगालोमा बेरिएकी यि सुन्दरी को हुन् ? किन पायो यो तस्बिरले चौतर्फि चर्चा ? | समाचार
September 2, 2021 NepstokLeaveaComment on अभिनेता रणवीरको अँगालोमा बेरिएकी यि सुन्दरी को हुन् ? किन पायो यो तस्बिरले चौतर्फि चर्चा ?
एजेन्सी- बलिउड अभिनेता रणवीर सिंहको एउटा तस्विर सामाजिक संजालमा भाइरल भएको छ । उक्त तस्विरमा उनि एक महिला सँग अगालोमा बाधिएका छन् । तस्विरमा रणवीरको कपाल लामो लामो र फरक फेश देखिएको छ ।